Amathiphu wokuthi ungaphatha kanjani i-conjunctivitis
Izifo eziningi azijabulisi, futhi kukhona ezinye ukuthi, phakathi kwezinye izinto, kubangele ukuphazamiseka okuningi. Lezi zinsuku zihlanganisa conjunctivitis, ngamanye amazwi ukuvuvukala kwekhanda elimangele liso. Izimpawu zakhe zibomvu, ukukhala, kanye nokuphulukiswa kwesinye isikhathi komzimba. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi yini okufanele ukhathaze i-conjunctivitis, ukuze ususe ngokushesha lesi sifo.
Kumele kuqashelwe ukuthi izimbangela ezibangela lesi sifo, ngokuvamile, amagciwane noma amabhaktheriya. Kulolu cala, umphatheli walo angathinta abanye. Okungavamile kakhulu yi-conjunctivitis ye-allergen, okulula kakhulu ukwelashwa.
Ukuze uqale ukwelashwa kwe- conjunctivitis yegciwane, okokuqala, kufanele uthintane nochwepheshe. Uzohlinzekela izivivinyo ngesisekelo saleso sizathu esibangela ukuthi lesi sifo sizobonakala, okufanele sisuswe. Ezimweni eziningi, ungadinga izidakamizwa zokulwa ne-antibacterial noma i-antiviral, ngesikhathi esifanayo ne-immunomodulating agents.
Ngaphandle kokwelapha, kunesibopho sokuqinisa ukulawula ukuhlanzeka komuntu siqu, geza izandla kaningi futhi uzame ukungabathinti emehlweni. Lesi sifo singasakazeka ohlangothini lwesibili. Odokotela batusa iziguli ukuthi zinciphise ukubonakala ezindaweni ezisesidlangalaleni, okudingekile ukuthi kungasakazeki nje ukutheleleka ngokwayo, kodwa futhi ukuthi ungaboni amabhaktheriya "angaphandle".
Ngenkambo eqhubekayo noma izinkinga ezingenzeka, ifomu eliphansi lingadlulela ekubeni yi-conjunctivitis engapheli, ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kakhulu futhi ehlala njalo. Ukususa izimpawu zesifo akusho ukuphola okuphelele, ngakho-ke izincomo zodokotela eziphakanyisiwe zokuthatha imithi kufanele zigcinwe ngokugcwele.
Ezimweni lapho kungenakwenzeka ngesizathu esithile sokubonisana nochwepheshe esikhathini esizayo esiseduze, lo mbuzo uvela, ukuthi yini okufanele ukhathazeke ngokuvumelana ne-conjunctivitis ekhaya. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa ukugeza nokucindezela amehlo. Njengoba izingxenye zithathwa ama-herbs ezinjalo zokwelapha njenge-chamomile (ine-anti-inflammatory and effect disinfectant effect), inhlakanipho (ikhulula ukucasuka nokubomvu), ikhalenda, i-nettle nabanye abaningi. Ngendlela ethandwayo, kunokwelapha i-conjunctivitis, kubantu kubhekwa ukuhliswa kwetiya elimnyama (ngaphandle kokungcola). Itiye ithululelwa ngamanzi abilayo, kuthatha isikhathi esithile, emva kwalokho amehlo ahlanzwa ngamahlamvu wetiyi. Le ndlela isetshenziselwa ukuphatha izingane nezilwane.
Ungalungiselela amaconsi amaso ngokwakho usebenzisa amanzi aphepheni (1:10) ahlanjululwe kahle nge-aloe juice. Ikhubaza i-membrane yamangqamu futhi isusa ukuvuvukala kwejwabu leso.
Ukugeza nokucindezeleka kusiza, kaningi, ezinyathelweni zokuqala zesifo, lapho kuphela izimpawu zokuqala ezivela. Uma lezi zidakamizwa zingasiza, kufanele nakanjani ubone udokotela obeka imithi, futhi akutshele indlela yokuphatha i-conjunctivitis.
Phakathi kwabo kungase kube i-Interferon ngendlela yamaconsi amehlo, i-tetracycline amafutha noma i-Albucid. Lapha kubalulekile ukukhumbula ukuthi akuwona wonke lo mithi ongasetshenziswa ezinganeni. Nge-conjunctivitis ye-allergen, ama-antihistamine anqunyelwe, isibonelo, uZirtek noma iTavegil.
Ukuvimbela isifo, kunconywa ukuthatha izinkimbinkimbi ze-multivitamin kanye nezidakamizwa ezikhuthaza isimiso somzimba samasosha omzimba. Uma ngabe lokhu kubonakaliswa kokungezwani komzimba, kuyadingeka ukunciphisa ukuxhumana nomuntu obangela ukuphendula okunjalo.
Phakathi kwezindlela zokugeza iso elithintekile (kanye nokusetshenziswa kwemithi), amanzi abilisiwe angasetshenziswa ngosawoti ehlakazwa kuwo (isipuni ngasinye ngeglasi). Into eyinhloko okufanele uyikhumbule ukuthi akunakwenzeka ukulibaziseka lapho kuqala ukwelashwa, ukuze ungatholi ifomu elingapheli lesi sifo.
Izimpawu, izimbangela kanye nokwelashwa kwesisu somzimba
Skeleton yesandla esingenhla. Imisebenzi yamathambo ezinyawo ezingenhla
Ukuskenela inethiwekhi: ukuqokwa Ukuvikelwa kuwo
Amagama Hungarian: umsuka kanye nezici
Ezicijile eyakhiwe ngezitini - inqaba okuthembekile
Indlela ashise ISO-isithombe kwi idrayivu ye-USB flash: imanuwali
"Ford Transit": umthamo, izici, ukulungiswa